Fahad Yaasiin oo ku wajahan Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin oo ku wajahan Gedo
Dowladda Fadaraalka ayaa maanta wafdi u direysa gobolka Gedo si loo dhameeyo wada-hadallada uu Cabdirashiid Janan ugu biirayo Dowladda uu hoggaankeedii waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo.
MUQDISH, Somaaliya - Wafdi ka socda Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa maanta ku wajahan degmada Doolow ee Gobolka Gedo, si loo dhameystiro heshiiska uu Wasiirkii hore ee Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ‘Janan’ ugu soo wareegayo dhanka DF.
Waftigaan oo ay ku jiraan xunbo ka tirsan Golaha Wasiirada ee Xukuumadda xil-gaarsiinta, Taliyaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Fahada Yaasiin, Taliyaha ciidamada Lugta Biixi, Saadaq Joon iyo Farxaan Qaaroole, aya la filayaa in ay isla maanta la kulmaan Janan.
Diyaarado sida gawaarida aan xabaddu karrin ayaa shalay ka degay Doolow, halka ay kasii horreeyeen ciidan hoos taga Hay’adda NISA, kuwaas sugaya amaanka waftiga Dowladda ee maanta ku wajahan Gedo.
Wafitiaan waxa ay u sii gudubi doonaan Balad-xaawo, halkaas oo ay kula kulmi doonaan Wasiirkii hore ee Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo sanad dagaal ah ka dib kusoo biiraya Dawladda Federaalka.
Waxaa maanta xiran qeybo ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee isku xira magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo, iyo guud ahaan xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya.
U soo wareegidda Cabdirashiid Janan ee dhanka Dowladda ayaa la filayaa in aysan wax badan u soo kordhin doonin Farmaajo, oo guud ahaan siyaasiyiinta ay is hayaan kala heshiiayay ninka ay isku heybta yihiin.